दुलही खोज्न सडक छेउछाउ बिलबोर्डमा विज्ञापन « Nepal Bahas
दुलही खोज्न सडक छेउछाउ बिलबोर्डमा विज्ञापन
प्रकाशित मिति : २५ पुष २०७८, आईतवार १४:१३
२५ पुस, एजेन्सी । सुन्दा पनि अचम्म लाग्न सक्छ दुलही खोज्न लन्डन र बर्मिङ्गमका सडकछेउछाउ बिलबोर्डमा विज्ञापन राखिएको कुराले । तर यो सत्य हो । यूकेमा एक अविवाहित युवकले ठट्यौलो पाराका सन्देशसहित आफू दुलहीको खोजीमा रहेको भन्दै ठूलाठूला बिलबोर्डमा विज्ञापन गरेका छन्।
उनन्तीस वर्षीय मोहम्मद मलिकले युवतीहरूलाई आफू विवाह गर्ने विचारमा रहेको सन्देश दिन लन्डन र बर्मिङ्गममा त्यस्तो विज्ञापन गरेका हुन्।सडकछेउछाउ राखिएका विज्ञापन गर्ने ठूला बोर्डमा उनको हँसिलो तस्बिरसहित ूमलाई मागी बिहेबाट जोगाऊू लेखिएको छ।
आफू परम्परागत मागी विवाहको विपक्षमा नरहे पनि पहिले ‘आफैँले खोजेर कसैलाई फेला पार्ने’ प्रयास गरेको उनले बताएको बीबीसीमा उल्लेख गरिएको छ । समाचारमा जनाइए अनुसार लन्डनमा बस्ने मलिक ब्याङ्कमा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्छन्। उनले अहिलेसम्म श्रीमती खोज्ने आफ्नो प्रयास उपलब्धिविहीन रहेको बताएका छन्।
अब एउटा विशेष वेबसाइट indmalikawife.com बाट दुलही खोज्ने अभियान जारी राख्ने उनको योजना छ। शनिवार बिलबोर्डमा विज्ञापन गरेपछि चासो देखाउँदै सयौँ सन्देश आएको उनले बताए।
मलिकले बिलबोर्डमा विज्ञापन गर्नुअघि महिलाहरू भेट्न अरू तरिका प्रयोग गरेको समेत बताएका छन् । त्यसपछि उनले जोडी खोज्न प्रयोग गरिने डेटिङ एप र केही डेटिङ कार्यक्रमको पनि सहारा लिए। तर ती दुवै आफूलाई अत्यासलाग्दा लागेको बताएका छन् ।
अन्त्यमा उनका एक साथीले उनलाई आफ्नो विज्ञापन गर्न सुझाव दिए। मलिक भन्छन्, ‘मैले सोचेँः किन नगर्ने ? त्यसमा खराबी नै के छ र ?’ उनले राखेका बिलबोर्ड जनवरी १४ सम्म रहनेछन्। मलिकले आफूलाई इस्लाम धर्ममा आस्था भएकी र परिवारसँग हाँसोठट्टामा पनि मिल्न सक्ने हुनुपर्ने बीबीसीसँग बताए ।
दाह संस्कार गर्ने क्रममा शिशु रुन थालेपछि, दम्पत्ति चकित
डमीको धमाधम टाउका काट्दै
सन् २०२१ मा अधिकांशकाे नजर पोर्न साइटतिर !!!
विद्युतीय कार टेस्लाभित्रै शिशुको जन्म !